၂၀၂၀ တွင်နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူ ၆ ယောက်သည်သိသင့်သောအချက်များ Martech Zone
အပြောင်းအလဲများနှင့်နည်းပညာပြောင်းလဲမှုများနှင့်အတူစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလမ်းကြောင်းများပေါ်ထွက်လာသည်မှာလျှို့ဝှက်ချက်မဟုတ်ပါ။ သင်၏စီးပွားရေးကိုထင်ရှားစေလိုလျှင်၊ ဝယ်သူအသစ်များယူဆောင်လာပြီးအွန်လိုင်းပေါ်တွင်မြင်သာမြင်သာမှုကိုတိုးမြှင့်လိုပါက၊ နည်းပညာပြောင်းလဲမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ တက်ကြွသောဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။
ဤဆောင်းပါး၌ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက်တီထွင်ဆန်းသစ်သောနည်းပညာခေတ်ရေစီးကြောင်း (၆) ခုအကြောင်းလေ့လာမည်။ စတင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။ ယခုနှစ်တွင်မြေပေါ်သို့ရောက်ရန်သင်လိုအပ်သောနည်းဗျူဟာများနှင့်ကိရိယာများကိုဒီမှာတွေ့ရသည်။
Trend 1: Omnichannel စျေးကွက်သည်မပိုနိုင်တော့ပါ၊ ၎င်းသည်လိုအပ်သည်
ယခုအချိန်အထိစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံရန်လူမှုရေးလမ်းကြောင်းအနည်းငယ်ကိုအာရုံစိုက်ရန်အောင်မြင်သူများရှိသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာတော့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်တော့ဘူး။ စီးပွားရေးစျေးကွက်သမားတစ်ယောက်အနေနဲ့၊ အကြောင်းအရာတိုင်းကိုအကြောင်းအရာတိုင်းတင်ဖို့အချိန်မရှိဘူး။ ရုပ်သံလိုင်းတစ်ခုစီအတွက်စိတ်ကြိုက်အကြောင်းအရာဖန်တီးမည့်အစား၊ သင်လုပ်နိုင်သည် အကြောင်းအရာ repurpose ပြီးတော့ချန်နယ်တိုင်းမှာတင်။ ၎င်းသည်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်စာတိုပေးပို့ရေးကိုအားဖြည့်ပေးရုံသာမကသင်၏စီးပွားရေးနှင့်သက်ဆိုင်သောသင်၏အွန်လိုင်းအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်ထိတွေ့မှုရှိစေမည်။
Omnichannel စျေးကွက်သည်သင်၏စုပေါင်းပရိသတ်ကိုသင်၏လိုင်းများကိုချောမွေ့စွာလည်ပတ်စေသည်။ ရလဒ်?
Cross-channel အရောင်းအကြမ်းအားဖြင့် $2ထရီလီယံတန်ဖိုးရှိဖြစ်ကြသည်။
Omnichannel စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုလုပ်ဆောင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါသလား။ အမေရိကန်လက်လီအရောင်းဆိုင်ဘယ်လောက်ကြီးတယ်ဆိုတာကြည့်ကြည့်ပါ ဦး ။ Nordstrom, Cross-channel စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုအကောင်အထည်ဖော်
အဆိုပါ Nordstrom Pinterest, Instagram ကိုနှင့် Facebook က အကောင့်အားလုံးမှာနှိပ်လို့ရတဲ့ကုန်စည်တင်ပို့ချက်တွေ၊
လူများသည် Nordstrom ၏လူမှုမီဒီယာအကောင့်များကိုကြည့်ရှုသောအခါ၎င်းတို့သည် Nordstrom ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ပို့ဆောင်သောပို့စ်များကို ၀ ယ်နိုင်သည်။
ဆိုက်သို့ရောက်သောအခါသူတို့သည်ပုံစံချိန်းဆိုမှုတစ်ခုကိုစီစဉ်နိုင်သည်၊ Nordstrom အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲ။ သစ္စာရှိမှုဆုအစီအစဉ်များကိုရယူနိုင်သည်။
Omnichannel စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်ဖောက်သည်အားအရည်အချင်းပြည့်ဝသောသံသရာ၊ ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု၊ အရောင်းနှင့်ဆုများရစေသည်။
၂၀၂၀ တွင် omnichannel marketing ကိုအာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်လူမှုမီဒီယာများမြင့်တက်လာခြင်းသည်အလိုအလျောက်ထုတ်ဝေသည့်ကိရိယာများလိုအပ်လာစေသည်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်၊ စီးပွားရေးပိုင်ရှင်များနှင့်စျေးကွက်သမားများသည်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပလက်ဖောင်းများစွာသို့တင်ရန်အချိန်မရှိပါ။
ရိုက်ထည့်ပါ - ပါဝင်သည့်အရာများဖန်တီးခြင်း၊ အရွယ်အစားပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ထုတ်လွှင့်ခြင်း ပိုစတာ။ သင်သည်အကြောင်းအရာများကိုဖန်တီးနိုင်ရုံသာမက Instagram post များသို့မဟုတ် Facebook မျှဝေထားသောဓာတ်ပုံများကဲ့သို့သောအတိုင်းအတာအမျိုးမျိုးကိုအရွယ်အစားပြောင်းနိုင်သည်။ အပိုဆုလား ဒါကအခမဲ့ပါ။ ဒါပေမယ့်အကြောင်းအရာကိုဖန်တီးရုံနဲ့မလုံလောက်ပါ၊ သင်လည်းထုတ်ဝေချင်တယ်။
အချိန်ကုန်သက်သာစေရန်သင်၏အကြောင်းအရာဖန်တီးခြင်းနှင့်ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်းများကိုအတူတကွလိုက်လုပ်ပါ။ တစ် ဦး တည်းထိုင်လျှင်, သင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အမြင်အာရုံအကြောင်းအရာဖန်တီးနှင့်ချန်နယ်တစ်ခုချင်းစီမှအလိုအလျှောက်ထုတ်ဝေရန်ကစီစဉ်ထားနိုင်ပါတယ်။ သွားလာရင်းဒီဇိုင်းများကိုအရွယ်အစားပြောင်းခြင်းနှင့်အလိုအလျောက်ထုတ်ဝေသည့်အကြောင်းအရာများကိုရိုးရိုး mouse ဖြင့်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင်အချိန်၊ ပိုက်ဆံချွေတာပြီးသင့်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်သက်ဆိုင်သည်။
Omnichannel ၏စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းသည် online တွင်အားလုံးပါဝင်ခြင်းနှင့်ညီမျှသည်။ ၎င်းသည်သင်လျစ်လျူရှု။ မရနိုင်သော ၂၀၂၀ နည်းပညာပြောင်းလဲမှုဖြစ်သည်။
ခေတ်ရေစီးကြောင်း 2: ဗီဒီယိုစျေးကွက်၏အနာဂတ်
ဗွီဒီယိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်မကြာသေးမီက buzzword တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း၊ အွန်လိုင်း ၀ က်ဘ်ဆိုက်ထက်ဝက်ကျော်သည်ဗီဒီယိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိန်းဂဏန်းများအရနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဗီဒီယိုများကြည့်ရှုနေသည်ဟုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည် HubSpotငါပြောမယ်၊ ဟုတ်ကဲ့။ လူတွေဘယ်လိုအကြောင်းအရာမျိုးကိုစောင့်ကြည့်နေကြသလဲ။ Facebook ဗွီဒီယိုကြော်ငြာများ၊ Instagram Stories နှင့် Live တို့လူကြိုက်များလာသည်နှင့်အမျှ Youtube သည်လွှမ်းမိုးမှုမရှိတော့ပါ။
အဆိုပါ ထိရောက်သောဗီဒီယိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်သော့ချက်မှာကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ရေးဖြစ်သည်။ လူများသည်အလွန်အရောင် တင်၍ ပြင်ဆင်ထားသောဗီဒီယိုများကိုမကြည့်လိုတော့ပါ။ အဲဒီအစား၊ သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကျိုးစီးပွားနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဗွီဒီယိုအကြောင်းအရာတွေကိုတပ်မက်ကြတယ်။ ကိုက်အရွယ်ဗီဒီယိုများ သင်၏ပရိသတ်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်နှင့်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ပိုမိုရင်းနှီးသောဘက်ကိုမျှဝေရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
စိတ်မပူပါနဲ့၊ ထိတွေ့စရာဗီဒီယိုအကြောင်းအရာများဖန်တီးရန်အတွက်ကျွမ်းကျင်သောဗီဒီယိုရိုက်ကူးသူတစ်ယောက်မလိုအပ်ပါ။ သက်ဆိုင်ပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုခြစ်ရာကနေဒါမှမဟုတ်အလွယ်တကူလုပ်နိုင်တယ် PosterMyWall တွင်ဗွီဒီယိုတင်းပလိတ်များ။ သင့်ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်သတင်းစကားကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်၊ ထုတ်ကုန်တစ်ခုစတင်ရန်သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီသတင်းများကိုပရိသတ်ကိုအသိပေးရန်ဗီဒီယိုများဖန်တီးပါ။
ဤတွင် PosterMyWall မည်မျှလွယ်ကူသည်။
မိတ္တူ၊ အရောင်၊ စာလုံးနှင့်ဒီဇိုင်းကိုအလွယ်တကူစိတ်ကြိုက်တည်းဖြတ်ရန်အယ်ဒီတာကိုသုံးပါ
ဗွီဒီယိုကို PosterMyWall မှသင်၏လူမှုရေးလမ်းကြောင်းများသို့တိုက်ရိုက်မျှဝေပါ
လွယ်ကူသောအဆင့်လေးဆင့်ဖြင့်သင်မျှဝေရန်တံဆိပ်ကပ်ထားသောဗီဒီယိုတစ်ခုရရှိထားသည်။ တိုတိုတုတ်တုတ်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောဗွီဒီယိုအကြောင်းအရာများဖြင့်သင်သည်ပရိသတ်ကိုအာရုံစူးစိုက်ရန်ရှေ့တန်းတွင်ရှိနေသည်။ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းသောနေရာဖြစ်သည်။
လမ်းကြောင်း ၃ - ကုန်ပစ္စည်းများကို Google Marketplace တွင်ရရှိနိုင်စေရန်
နည်းပညာပြောင်းလဲမှုအသစ်သည်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများအတွက်ထုတ်ကုန်များကို Google Marketplace သို့တွန်းပို့ခြင်း၏အဓိကခေါင်းစဉ်ဖြစ်သည်။ အတိုက်အခံများက ၄ င်းတို့သည်သူတို့၏စီးပွားရေးအမှတ်တံဆိပ်နှင့်ဝိသေသလက္ခဏာကိုထင်ဟပ်စေသောစွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်ကြီးမားသောငွေပမာဏကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်ဟုဆိုကြသည်။ ထုတ်ကုန်များကိုဂူးဂဲလ်သို့ပို့ခြင်းသည် visitors ည့်သည်များအတွက်သူတို့၏ပြီးပြည့်စုံသောထုပ်ပိုးထားသည့် site ကိုအံ့ to ရန်အခွင့်အလမ်းကိုဖယ်ရှားသည် ရလဒ်? Web traffic သိသိသာသာကျဆင်းခြင်း။
ဒီမက်ထရစ်ကိုကျော်ပြီးကြည့်ရအောင်။ သင်ရောင်းချင်ပါသလား ဒါမှမဟုတ်သင်အလွယ်တကူလည်ပတ်နိုင်သည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိလိုပါသလား။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သင်ရောင်းချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းကရောင်းအားတစ်ချောင်းမဟုတ်ဘူး၊ ထပ်ခါထပ်ခါသစ္စာရှိတဲ့ဖောက်သည်တွေလိုချင်တယ်၊ ဒါကြောင့်သင်ကအရမ်းကောင်းတဲ့ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုဖန်တီးခဲ့တာလား မှန်ပါတယ်
Google Marketplace ကိုသင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကွယ်လွန်ခြင်းဟုမှတ်ယူမည့်အစားသင်၏အမှတ်တံဆိပ်အားအသိပေးရန်အခြားလမ်းကြောင်းတစ်ခုအဖြစ်စဉ်းစားပါ။ အခြားကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည်ကုန်ပစ္စည်းများကိုဂူဂဲလ်သို့တွန်းပို့ခြင်းနှင့်ယာဉ်အသွားအလာဆုံးရှုံးခြင်းအလားအလာကိုသိသိသာသာလျော့ကျစေပြီးသင်၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုခုန်။ စာရင်းပြုစုနိုင်သည်၊ အရောင်းရဆုံးနှင့်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်ကိုကြီးထွားစေနိုင်သည်။
သင်၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုမိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းဂူဂဲလ်မှတစ်ဆင့်ရောင်းရန်စာရင်းပြုစုနိုင်ခြင်းသည်၎င်းကိုသင်လျစ်လျူရှု။ မရနိုင်သောလွယ်ကူသော (နှင့်အခမဲ့!) စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်စေသည်။
ပထမ ဦး စွာသင်၏ခေါင်းကို Google My Business အကောင့်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်များ၊ ပုံများထည့်။ မိနစ်ပိုင်းအတွင်းစတင်စတင်နိုင်သည်။ သင်၏ဝဘ်ဆိုက်နှင့်လူမှုမီဒီယာလိုင်းများမှသင်၏အမှတ်တံဆိပ်အသံ၊ စာတိုပို့ခြင်းနှင့်တံဆိပ်ခတ်ခြင်းကိုအားဖြည့်လိုသည်။ ဆိုလိုတာကရှုပ်ထွေးတဲ့ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းတွေကိုသင်မချချင်ဘူး။ ဂူဂဲလ်စျေးကွက်ကိုသင်၏အွန်လိုင်းစတိုးနှင့်အတူတူဆက်ဆံပါ၊ ပုံများ၊ မိတ္တူများနှင့်ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။
လမ်းကြောင်း 4: SERPS မျက်နှာသာပေး Schema Markups နှင့် Rich Snippets
ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည် SEO (Search Engine Optimization) အပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် target keywords ကိုရွေးချယ်ပြီး web traffic ကိုယူဆောင်လာရန် image alt text ကိုသုံးခြင်းထက်ပိုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဟုတ်ပါသည်၊ SEO SEO အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်ကိုသင်အသုံးပြုရန်လိုအပ်ဆဲဖြစ်သော်လည်းယခုတွင်၎င်းသည် Schema Markups ဖြင့်ကြွယ်ဝသောအတိုအထွာများကိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
Rich snippet တွင် Schema markup ဟုခေါ်သော microdata ပါရှိသည်၊ ၎င်းသည်ဝဘ်စာမျက်နှာတစ်ခုစီ၏အကြောင်းအရာများကိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များအားရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်“ ကော်ဖီဖျော်စက်” ကို Google ၏ရှာဖွေရေးဘားထဲသို့ထည့်သောအခါထိုရလဒ်များမှလူများသည်ကလစ်လုပ်ရန်ပိုဖြစ်နိုင်သည်ဟုသင်ထင်သည် -
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်, စျေးနှုန်း, ဖောက်သည်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
မရှင်းလင်းသော meta ဖော်ပြချက်သည်စာမျက်နှာမှကျပန်း၊ ဆွဲဆောင်ခြင်းမရှိ၊ စျေးနှုန်းလည်းမရှိ၊ အချက်အလက်လည်းမရှိပါ
ပထမဆုံးရွေးချယ်မှုကိုသင်မှန်းဆခဲ့လျှင်သင်မှန်သည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် Google နှင့် Yahoo အပါအ ၀ င်အဓိကရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များအားလုံးသည် SERPs (Search Engine Results Pages) ကိုဆွဲထုတ်သောအခါ schema markups နှင့်ကြွယ်ဝသောအတိုကောက်များကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။
သင်ဘာလုပ်နိုင်ပါသလဲ သင့်တွင်ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိသည် Schema.org ဖန်တီးရန် ငွေရတတ်သောသူအတိုအထွာသို့မဟုတ်၏အားသာချက်ယူပါ Google မှဒီအခမဲ့ tool ကို။ ယခုသင်၏ထုတ်ကုန်စာမျက်နှာတစ်ခုစီသည်သင့်လုပ်ငန်း၏မြင်သာမှုကိုတိုးပွားစေသည့်သက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်နှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။
လမ်းကြောင်း ၅ - AI သည် Hyper-Personalization ကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်
oxymoron လိုအသံလား။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုရသော်၎င်းသည်၎င်းနှင့်ဆက်စပ်မှုကိုမလျော့နည်းစေပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနေရာတွင်ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်မှုအကြောင်းဆွေးနွေးသည့်အခါဖောက်သည်တစ် ဦး အားကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်အတွေ့အကြုံများပေးရန်နည်းလမ်းများကိုကျွန်ုပ်တို့လေ့လာနေသည်။
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပါရစေ။ AI ကိုမှန်ကန်စွာအသုံးပြုသောအခါကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုလူသားမဆန်အောင်ပြုလုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းအစား၎င်းသည်ပိုမိုစိတ် ၀ င် စား၍ အပြုသဘောဆောင်သည့်ဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုအတွေ့အကြုံကိုဖန်တီးရာတွင်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးတွင်သုံးစွဲသူများသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမပါသောမီဒီယာကိုငြီးငွေ့နေကြသည်။ နေရာအနှံ့ပျံ့နှံ့နေတဲ့မီဒီယာကသူတို့ကိုလွှမ်းမိုးစေတဲ့အချက်ကိုသင်စဉ်းစားတဲ့အခါ တစ်နေ့လျှင်ကြော်ငြာ ၅၀၀၀သူတို့ဘာကြောင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေရတာလဲဆိုတာလွယ်လွယ်ကူကူသိနိုင်တယ်။ ဆူညံသံကိုထပ်မံထည့်သွင်းမည့်အစားပိုမိုစိတ်ကြိုက်တွေ့ကြုံမှုတစ်ခုဖန်တီးရန် AI ကိုကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်။
နည်းပညာအပြောင်းအလဲများနှင့် AI ဆော့ဖ်ဝဲလ်များ ၀ င်ရောက်လာခြင်းကြောင့်စျေးကွက်သမားများသည်၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များအားပိုမိုရင်းနှီးသောအဆင့်တွင်ရယူနိုင်သည်။ AI ကိုသင်ကိုယ်တိုင်ရရှိရန်သင်အသုံးပြုနိုင်သောအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုမှာ၎င်းတို့နှစ်သက်သောအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းရန်ဖြစ်သည်။
သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်လူမှုမီဒီယာထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုဂရုတစိုက်ဆန်းစစ်ပါ။ အဘယ်ပုံစံများပေါ်ထွက်လာသနည်း သူတို့နှင့်စကားပြောသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ပုံရိပ်ဖန်တီးရန်ဖောက်သည်ပုဂ္ဂိုလ်များကိုသင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ သင်အမှန်တကယ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ဖောက်သည်ဆက်သွယ်မှုကိုလိုချင်လျှင်၎င်းသည်မလုံလောက်သေးပါ။
ဒါကြောင့်အဓိကကုန်အမှတ်တံဆိပ်တွေက AI ကိုသုံးတယ်။
Netflix သည်အသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်းစီ၏သမိုင်းကို အခြေခံ၍ စောင့်ကြည့်လိုသောအရာကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သည်။
Armor လက်အောက်တွင်အစာစားခြင်း၊ အိပ်ခြင်း၊
Chatbots သည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်လျှင်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်၏ Facebook စာမျက်နှာရှိ visitors ည့်သည်များအားမေးမြန်းနိုင်သည်။
အဓိကအချက် - ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်သင်၏ဖောက်သည်များနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဆက်ဆံမှုရရန် AI မှအကူအညီအနည်းငယ်လိုအပ်လိမ့်မည်။
Trend 6: Voice Search သည် Visual Content ကိုအစားထိုးမှာမဟုတ်ဘူး
ရှာဖွေမှု၏တစ်ဝက်ကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်အသံရှာဖွေခြင်းမှပြုလုပ်လိမ့်မည်။
သင်၏အာရုံကိုအသံရှာဖွေခြင်းကိုအာရုံစိုက်ရန်ကောင်းသည်။ သို့သော်ထိုသို့ပြုလုပ်ရာတွင်အမြင်ပါ ၀ င်သည့်အကြောင်းအရာသည်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပေါင်မုန့်ဖြစ်သည်ဟုမမှားပါစေနှင့်။ တကယ်တော့ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲ။ သက်သေအထောက်အထားလိုပါသလား ၎င်းကို Instagram ဟုခေါ်ပြီး၎င်းတွင်ရှိသည် 1 ဘီလီယံခန့်ကိုလစဉ်တက်ကြွအသုံးပြုသူများသည် ဇန်နဝါရီလ 2020 အဖြစ်။
လူတို့သည်အမြင်အာရုံပါအကြောင်းအရာများကိုမငြင်းဆိုနိုင်ကြပါ။ အဘယ်ကြောင့်သူတို့မလို? ပုံရိပ်ယောင်များနှင့်အတူသူတို့:
၂၀၂၀ တွင်အမြင်အရောင်းမြှင့်တင်မှု၏အရေးပါမှုသည်မပြောင်းလဲသေးသော်လည်းဆန်းသစ်သောအယူအဆများပေါ်ပေါက်လာခြင်းသည်စျေးကွက်သမားများအားအမြင်အာရုံအကြောင်းအရာကိုဖန်တီးရန်ဝေးကွာသွားနိုင်သည်။ ဤသည်မလွှဲမရှောင်တစ်ထိခိုက်နစ်နာဖြစ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏အဝေးရောက်မဟာဗျူဟာအားလုံးတွင်ထူးကဲသောရုပ်ပုံများကိုထည့်သွင်းရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
သင့်အားကူညီရန် PosterMyWall သည်ရုပ်ပုံများနှင့်အပြည့်အဝသိုလှောင်ထားသည် စာကြည့်တိုက်, ဗီဒီယိုတင်းပလိတ်များနှင့်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒီဇိုင်းတင်းပလိတ်များ။ ဒီအခမဲ့ဒီဇိုင်းဆော့ (ဖ်) ဝဲဖြင့်သင်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ကိုက်ညီရန်စာသားများ၊ အရောင်များနှင့်ဓါတ်ပုံများကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်တင်းပလိတ်များကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ်သင်လူမှုမီဒီယာပို့စ်များ၊ ဘလော့ဂ်ပုံရိပ်များ၊ စိတ်ကြိုက်ထုတ်ကုန်ပုံများနှင့်အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်းဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုများကိုလွယ်ကူစွာအသုံးပြုရန်တည်းဖြတ်ရေးဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) ဖြင့်အစကန ဦး ဖန်တီးနိုင်သည်။
သင်၏ omnichannel စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်ဤပုံရိပ်ယောင်များကိုပြန်လည်တပ်ဆင်ရန်မမေ့ပါနှင့်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည် blog post ခေါင်းစဉ်တစ်ခု ဖန်တီး၍ ၎င်းကို Pinterest pin သို့မဟုတ် Instagram post နှင့် voila သို့အရွယ်အစားပြောင်းနိုင်သည်။ ချန်နယ်အမျိုးမျိုးအတွက်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအကြောင်းအရာများသင်ရရှိထားသည်။
သင့်အတွက် Tech Changes ပြောင်းပါ
၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်ဖောက်သည်များ ၀ င်ရောက်ရန်၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသိပညာတိုးပွားစေရန်နှင့်သင်၏စီးပွားရေးကိုကြီးထွားစေရန်ကျယ်ပြန့်သောကွန်ယက်တစ်ခုချရန်လိုအပ်သည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နဲ့ခေတ်ရေစီးကြောင်းရဲ့ရှေ့ဆက်ဖို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်သော့ချက်မှာစျေးကွက်ရှာဖွေသူများကပြောင်းလဲခြင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းကြောင့်အလိုက်သင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ သငျသညျနည်းပညာအပြောင်းအလဲများဖို့သင်ပိုမိုပွင့်လင်းခြင်းနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်လေ, သင်ပိုမိုအကျိုးရှိစွာသူတို့ကိုသင်တို့၏အကျိုးရှိစွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဘယ်အချိန်မှာလုပ်မှာလဲ။ ကောင်းပြီ၊ မင်းကိုမတားဆီးနိုင်ဘူး!
Christina Lyon သည် SoCal မှစာရေးဆရာ၊ ဘလော့ဂါနှင့်ဂီတပညာရှင်ဖြစ်သည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်အတူအွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကြီးထွားလာရန်သူမကူညီနေသည်။ သူသည်စားပွဲခုံပေါ်မှထွက်သွားသောအခါစိတ်ကူးယဉ်စာဖတ်ခြင်း၊ ကမ်းခြေလမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်တေးဂီတကစားခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။
Short.io: အဖြူရောင်တံဆိပ် URL အတိုကောက်